Ama-Semalt Shares 5 Ama-Plugin Essential Essentials Njalo Izidingo Zendawo Site
I-WordPress yiyona ndlela edumile kakhulu futhi ehamba phambili yokuphathwa kokuqukethwe futhi inikeza ukuguquguquka okungenakuqhathaniswa kokubili abaqalayo nabachwepheshe. Kulula ukuyisebenzisa futhi ingasetshenziselwa ukudala amawebhusayithi amabili ayisisekelo nephambili. Ngisho noma ungewona umthuthukisi wewebhu osebenzayo, ungasebenzisa iZwiPress ukudala amasayithi ochwepheshe. Iqukethe izinhlobo eziningi ze-themes nama-plugin akhethekile, kodwa izinhlobo ze-plugin ezimangalisayo kakhulu nezibalulekile zichazwe ngezansi ngu-Ryan Johnson kusuka ku- Semalt .
Ukuphepha okubhekiswe kuma-bots kanye nabaduni kufanele kube yinto ebaluleke kakhulu kunoma iyiphi i-webmaster kulezi zinsuku. Kumele ugcine okuthile endaweni ukuvimbela ukuhlaselwa okuvamile. Ngokujabulisayo, kunezinye izinhlelo zokusebenza eziyisisekelo neziphambili ukuqinisekisa ukuphepha kwakho kwi-intanethi. I-Wordfence ingenye ye-plugin engcono kakhulu futhi ewusizo kakhulu kuze kube yimanje. Isiza ukuvikela iwebhusayithi yakho futhi iyatholakala kokubili izinguqulo zamahhala nezakhokhelwayo. Le plugin ihlose ukuba yisisombululo sakho soke-sokuphepha futhi ingavimbela kalula ukuhlasela okunamandla okuvimbela amandla kanye nemizamo yokungena ngemvume yezwe.
Ama-plugin wokulondoloza idatha:
Izinkampani eziningi zokubamba zigcina izigcawu zamakhasimende abo, kodwa asikwazi ukuzithemba ngenxa yokukhathazeka kwangasese. Uma ungafuni ukuba usesimweni sokulahlekelwa idatha yakho, kufanele ufake i-plugin yokusekelayo ku-WordPress ngokushesha ngangokunokwenzeka..I-plugin edume kunazo zonke ungazama ukuthi i-Backup Buddy. Ithuluzi elithakazelisayo elikuvumela ukuthi uhlele amasilondolozi amasonto onke, nsuku zonke nenyanga. Ikwazi ukugcina amafayela akho ku-intanethi nokungaxhunyiwe ku-intanethi, futhi inzuzo enkulu yalokhu i-plugin yukuthi imali yokubhaliselwa kwayo i-$ 70 kuphela. Lokhu kukuvumela ukuthi ugcine amafayela angafika ku-1GB. Futhi uma ufuna i-plugin yamahhala, ungazama i-BackWupup.
Ama-plugin wokusebenzisa injini yokusesha:
Uma ufuna ukuheha abantu abaningi kusayithi lakho futhi lifuna ukuthi lilungiselele imiphumela yemiphumela yokusesha, kuzomele uzame ama-plugin optimization search engine ku-WordPress. I-SEO noma ukucinga injini yokusesha kubalulekile ukudweba abantu kumawebhusayithi akho, futhi ungasebenzisa ama-plugin ahlukene ukuze wenze izinto zenziwe. I-WordPress SEO yi-Yoast yiyona plugin engcono kakhulu nenembile kakhulu. Isixazululo esinzulu kuzo zonke izinkinga zakho ezihlobene ne-SEO. Kukusiza ukuthi ufake isihloko se-SEO, incazelo, amagama angukhiye, namathegi kumakhasi akho wewebhu kalula futhi usindise isikhathi esiningi.
Izingosi zokuxhumana zenhlalo ziye zashintsha izindlela esabelana ngazo ngama-intanethi kwi-intanethi futhi siyingxenye ebalulekile yewebhu yonke. Ngokweningi lamawebusayithi, ukushayela imoto emithonjeni yezenhlalo kulula, futhi ungasebenzisa ama-plugins wezokuxhumana. Izinkinobho zokwabelana nge-AddToAny iyi-plugin ephelele futhi esetshenziswa kakhulu. I-customizable futhi ikuvumela ukuba wabelane ngokuqukethwe kumasayithi omphakathi wezokuxhumana kalula. Ungase uzame futhi izinkinobho zokwabelana ezilula ze-WordPress ezinezinketho eziningi nezinketho ukuze uzuze.
Uma ufuna ukuqapha izinga le-traffic yakho yewebhu, ungakhetha ukusebenzisa i-Google Analytics. Kodwa-ke, uma ufuna imibiko enembile futhi esheshayo, kufanele ufake i-plugin ye-WordPress ngangokunokwenzeka. I-Google Analytics iyisixazululo esihle kakhulu se-analytics ku-intanethi. Kuyinto mahhala futhi esheshayo ukuhlanganisa nge-WordPress site lakho. Ungakwazi ukulandelela zonke izixhumanisi, uthole ulwazi lwesikhathi sangempela futhi wenze ukuhlolwa kwe-A / B usebenzisa lolu hlelo.